नारी दिवसमा रोएकी चेली - Pahilo News
काठमाडौ, २६ फागुन । एक्कासी कोही चिच्याएको आवाज आयो । म झसंग ब्युझिए । विस्तारै उठेर पर्दा खोले विहानको ६ बजिसके छ । झ्याल खोले विहानको चिसो हावाले केही मिठो अनुभुति दिइरहेको थियो ।
घरको आगनमा भर्खर फुल फुलेर चिचिलो लाग्न लागेको आरुको बोटलाई नियाल्दै थिए । फेरि कोही रोएको आवाज आयो । ध्यानमग्न भएर त्यही आवाजलाई पछ्याउने कोसिस गरे । छिमेकी दिदि रहिछन । विस्तारै उनको घरमा नजर लगाए । वेस्सरी रुदै थिइन । चिसो हावाले ज्यानलाई चिसो बनाएको बेला मनलाई पनि चिसो बनाउँदै थियो । किन एकाबिहानै रोएकी होलीन ? हरेक राम्रो विहानीले दिनलाई पनि राम्रो बनाउछ भन्ने सुनेकी थिए ।
तर ती दिदिको रुवाई अली बेग्लै लाग्यो । एक्कासी ठुलो स्वरमा रुदै भनिन मलाई डिभोर्स चाहियो । म झस्के । उनले फोनमा कसैलाई रुदै आफ्ना कुरा भन्दै थिइनः लोकसेवाको तयारी कक्षा पढ्न जादा पनि को केटासँग घुम्न जान्छेस भन्छन, दिनरात कुटाई खानुपर्छ, म आजै अदालत जान्छु, तपाई त्यही आउनु । म डिभोर्स गर्छु । बस्दै बस्दिन । मेरो मन भारी भयो ।
सोचे आज त मार्च ८ । अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस । सारा विश्वका महिलाले भोगेको विभेद र हिंसा रोक्न निरन्तरता दिने दिनको रुपमा परिचित छ । तर विश्वले नारी दिवसलाई उत्सवको रुपमा मनाइरहदा यी दिदिको बनेको घर विग्रने अवस्थामा छ ।
तर विश्वले नारी दिवसलाई उत्सवको रुपमा मनाइरहदा यी दिदिको बनेको घर विग्रने अवस्थामा छ ।
आजभोलि विहान उठेपछि पाँच मिनेट भएपनि सामाजिक सञ्जाल हेर्ने बानी परिसकेको छ । फेसबुक र ट्वीटरमा महिला र पुरुष सबैले नारी दिवसको शुभकाना दिइरहेका थिए । साथीहरुले प्रभातफेरिमा सहभागी हुन निम्तो पनि दिएका रहेछन । विभिन्न अन्तक्रियामा भाग लिन आउन पनि निम्तो रहेछ ।
विहानको शुरुवातमा नै मन भारी बनाएर बजार लागेकी म एउटा होटलमा चिया खान पसे । चिया पनि नशा जस्तै भएको छ । टाउको भारी भयो भने एक गिलास चिया पिएपछि अलि राहत महसुस हुने । होटेलमा बसिरहेकी थिए । एउटी १३/१४ वर्षकी बहिनीले तीन कप चिया होटलको बाहिराबाट फिर्ता ल्याइन । मलिन अनुहार बनाउँदै साहुलाई भनिन चिया लाने ठाउँ पत्तै लागेन । उनलाई त्यो होटेलको साहुले निकै गाली गरयो । एक पटक मात्र होइन उनले पटक पटक गाली गरिहर्यो । चिया पिएर फ्रेस हुन आएकी म झन अपसेट भए । तैपनि अर्डर गरेपछि खानै पर्यो । चुपचाप केही बोलिन । बोल्ने आँटै आएन । चिया खाए त्यहाँबाट निस्किए । मनमा अनेक कुराहरु खेलाउँदै ।
महिला हिंसाका ठुला ठुला अभियान नचलेका होइनन तर बास्तविक पीडितहरुकोमा त यो कहिल्यै पुग्न नसकेको विभिन्न घटनाबाट महसुस गरेको छु । काठमाडौको धुलोसँग अन्तक्रिया गर्दै दुईपांग्रे हुईक्याउदै आफ्नो गन्तव्य तिर लागे । दिउँसो घाम चर्को लाग्न थालिसकेछ । अलि गर्मी महसुस भयो ।
यसो हेरे कतै चिसो पिउने ठाउँ छ कि ? मेरिस्टोप सेन्टरको छेउमै एउटा सानो चिया दोकान रहेछ । सोचे यही चिसो पिएर निस्कन्छु । साहुजीसँग चिसो मागेर पिउदै थिए । दुई जना महिला एकआपसमा विवाद गरेजस्तो लाग्यो । सुरुमा खासै चासो दिइन ।
अरुको पर्सनल कुरा ध्यान दिएर किन सुन्नु भन्ने पनि लाग्यो । पछि सासु बुहारी रहेछन । सासुले भन्दै थिइन घरमा एउटा वंश चलाउने नाती खोजेका छन ससुराले । यो पेटमा भएको छोरीलाई जसरी पनि फालेर अर्को नाती पाउनुपर्छ । बुहारी भने केही नबोली रुदै थिइन । उनलाई कन्भिन्स गर्दै थिइन सासु, भन्दै थिइन हामी आइमाईको जात दुख भोग्न जन्मिएका हौ ।
मेरो विहानीले बास्तवमै दिनको संकेत गर्यो । विहानै छिमेकी दिदिको रुवाईबाट मैले एकै दिन तीनजना चेलीका आशुलाई नजिकैबाट देखे । उनीहरुलाई नारी दिवसले कतैपनि छोएको थिएन । उनीहरु चिच्याई चिच्याई रुन चाहान्थ्ये होलान तर उनीहरुलाई रुन पनि छुट थिएन । आशु लुकाउन विवश थिए । आवाज लुकाउन विवश थिए ।
विहानै छिमेकी दिदिको रुवाईबाट मैले एकै दिन तीनजना चेलीका आशुलाई नजिकैबाट देखे । उनीहरुलाई नारी दिवसले कतैपनि छोएको थिएन ।
महिला र पुरुष एक रथका दुई पांग्रा हुन । यो धुव्रसत्य हो । विवेकी श्रीमान भएको घरकी श्रीमती ‘रानी’ हुन्छे । यहाँ केही पितृसत्तात्मक सोच भएका पुरुषका कारण मात्र होइन पितृसत्तात्मक सोच भएका महिलाबाटै महिलाहिंसा भएको छ ।
पुरुषलाई गाली गर्नु भन्दा पहिला पितृसत्तात्मक सोच भएका महिला शिक्षित चेतनशील बन्नु जरुरी छ । कतिपय शिक्षित देखिने महिला नै साँघुरो सोचाई, पराम्परागत चिन्तनबाट ग्रसित हुन्छन जसले महिला हिंसालाई प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ । महिला र पुरुष दुवैले एकअर्कालाई बुझ्ने हो भने, महिला महिलाबीचको इष्र्या, साँघुरो सोचाईलाई फराकिलो बनाउने हो भने महिला हिंसालाई न्युनिकरण गर्न ठुलो मदत पुग्छ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतापछि नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल..